छाला देखि पेटसम्मको लागि वरदान हो सात्तु, मधुमेह र मोटोपन लागि झन् फाइदाजनक । – Yuwa Aawaj
बैसाख ३०, २०७८ बिहिबार 171
काठमाडौँ : मुलुकभर अहिले निकै गर्मी बढिरहेको छ, विशेषगरी तराई क्षेत्रमा। मानिसहरुका लागि घरबाट बाहिर निस्कन मात्र नभई घरभित्र बस्न पनि मुश्किल भईरहेको छ।
बुढापाकाहरुका लागि सात्तु अमृत समान हुन्छ। बढ्दो उमेरसँगै बुढाबुढीहरुका शरीरमा अनेक समस्याले डेरा जमाउन थाल्छन्। जसमध्ये पाचन प्रणाली ख’राब हुनु, क’ब्जियत, ए’सिडिटी र मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरु आदि हुन्। यी रो’गहरुसँग लड्न सात्तु निकै लाभ’दायक हुन्छ।
च|म्किलो, गोरो एवं सुन्दर त्वचा कसले पो चाहदैनन् र ? तर आफ्नो त्वचाको खास ख्याल नगर्दा र पोषक तत्व सन्तुलन नमिल्दा तपाईको त्वचा सुख्खा, खस्रो र अस्वस्थ हुन्छ। हरेक दिन सात्तुलाई पानीमा घोलेर पिउँदा तपाईको त्वचा हाइड्रेट रहन्छ र नयाँ को’शिकाहरु बनाउन मद्दत पुग्दछ।
यदि तपाई लामो, घना, बाक्लो, सुन्दर र कालो कपाल चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो हरेक दिनको डाइटमा सात्तु ड्रिं’कको प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोला। पोषक तत्वको कमीको
कारण कपाल पातलो हुने, कपाल झर्ने र समयअगावै सेतो हुने जस्ता समस्याहरु हुन्छ। हाम्रो शरीरजस्तै हाम्रो कपालको लागि पनि पोषक तत्वको आवश्यकता पर्दछ र सात्तुमा हुने प्रोटिन, भिटामिन र एन्टि-अक्सि’डेन्टले यस कमीको पू’र्ति गर्दछ। -बिगुल न्युज
Prevसुकेको मरिचमा लुकेको चमत्कारी फाईदा-फाइदा थाहा पाउनुहोस ।
Nextफेरि एका एक चर्चामा किन आए संचारकर्मी रबि लामिछाने ?(भिडियो सहित)
३. असारदेखि के-के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्ताे छ सरकारकाे तयारी ! (2219)